"जिन्दगी को यात्रा" | मझेरी डट कम
Keshab Singh Dhami — Thu, 12/22/2011 - 08:54
कुन शब्दले सम्बोधन गरु तपाईंलाई आफैँ अलमलमा परे अनि सोचे तपाईंकै नाम मात्रै लेखु । कति नमिठो हुदोँरहेछ विछोडको पिडा...नचाएर पनि भोगीरहेको छु । मिलनका कसमहरु पुरा गर्न नसक्दा यो अन्तिम पलमा पनि तडपिरहेको छु । तडपिनु बाहेक अरु के नै गर्न सक्छु र जब समयले नै धोका दिइगयो । साथ रहने वाचा हाम्रा सबै खेर जाने भयो । विवशता अनौठो आइलाग्यो, अप्ठेराहरु अच्चमका देखापरे । सधैँ साथ दिन्छु भन्थे तर बाध्यतावश हाम्रो साथ छुट्ने भयो ।.....
केशु दोष तपाईंको केही छैन । दोष त मेरो पनि उत्तिकै छ् । यो धर्तिमा आउँदा भगवानसित थोरै समय मात्र लिएर आएको रहेछु । तपाईंसँगै जीवन बिताउने चाहना थियो तर सबै इच्छा कहाँ पुरा हुदाँ रहेछ र !!! मेरो हृदय अब धेरै नदुखाउनु । म तपाइबाट धेरै टाढा जादैँछु, सक्छौ भने मलाई माफ गरिदिनु । मलाई बिर्सीयर् आफ्नो पुरानै संसार रमाउनु... तपाईंको खुशिमा नै मेरो खुशि छ...बिन्ती हजुर को नयनबाट कहिल्यै आशुँ नर्झानु । यो जुनीलाई यस्तै भो अर्को जुनी संगै बिताउलाँ ।
म एक यथार्थ र वास्तविकता लाइ सहि ठान्दै आयाकी आज यो मेरो भुल भयछ । यो भुल लाइ मेरो जिन्दकी भर प्रत्यक हिडाइका पाइला हरु मा , मोड हरुमा हल्चली मचाईनै रहनेछ । त्यो दिन लाइ म आज नि सम्झदा मनै देखि एर्षा र मायाको समिर्शण भयर सम्भावना बनी आइ दिन्छ । माया न् भयको त कहाँ हो र? यस दुनियाँ मा जन्म लिय पछी समाज को नि ख्याल गर्नु पर्ने रहेछ । मन ले चाहेमा सबै कुरा काहापो हुदो रहेछ र ? कसैको खुशी जीन्दकी लाई उजाडेर आफ्नो खुशीको लागि लत्यौनु त भयन नि हैन र? जे भय नि माया भन्ने कुरा यस्तै हुदो रहेछ जती लाउदा कठिन् हुन्छ त्यो भन्दा बढी बिछोडिदा को पिडा ले आज नि मेरो मन मा सन सानी परेको छ ।
कुरा केही दिन अगाडी को मात्र हो म इलाम को एक सुन्दर नगरी मा गैरसरकारी संघ सङँथा मा कार्यरत थिय । म केवल आफ्नो जिन्दकी का पाइला लाई आफै सामु केन्द्रित गर्दै दिन अनि रात , साझ बिहान आफ्नो भविष्य लाई मध्ये नजर गर्दै एक कर्तब्य निस्ठ भयर काम मा अघि बढी रहेकी थिय । पर पुरुस , जो कोहि संग नि तिलान्जली दिदै आफ्ना गन्तब्य का पाइला हरु अगाडी बढाई नै रहथ्य । येही निरन्तरता लाई कहिले काही आधि बेहरी आयर लान्न होला भनि सोची रहथ्य तर ठिक बिपरित भयछ जहाँ मा केवल आज भोली पछाडि हेर्दा दोसाद को बीच मा परेकी छु । यो दोष मेरो हो की मेरो जवानी को भनु यकिन गर्न सकिन , मेरो सोख चाहना धेरै साथीहरु बनाउनु र नयाँ कुरा को जानकारी थाहा पाउनु थियो तेस्कै सिलसिलामा नयाँ साथी को खोजि मा थिया । येही खोजि को हिदैमा अनेकन भावना भयका साथीहरु म संग नजिकिन खोजे तर मैले सबै साथी हरुलाई इन्कार गरिदिन्थ्य तर एस पाली मेरो जिन्दकी मा जिन्दकी को पहिलो युवा म सामु आयो तर उसलाई मैले किन नाइँ भनेन म आफै लाइ प्रस्न सोध्न्ना पुग्छु । समयको गति संगै मेरो यौबन को नि कुरा आउछ युवा अब्स्थ्य मा पर स्त्री माथि पर पुरुस आखा गाडिनु सोभाबिकै हो यो कुन नौलो कुरा हो र? जवानी मा चढेको त्यो नव युबक को एक हेराइले नै मलाइ पर्भाबित पारयो. त्यो दिन को आज नि झल् झली याद आइ नै रहन्छ जुन त्यो पश्चिम को मान्छे पुर्ब मा आयर मलाइ किन एती नाजिक्यायर आज आफु एक्लो दुनिया मा जान पुग्यो र आफ्नै संसार मा रमाउन पुग्यो म आफै लाइ थाहा छैन उ कहाँ को म कहाकी जहाँ जुन ठाउँ को भय नि म संग भयको बेला मेरो भन्दा बढी नै माया दियको थियो । ती मोड को याद ले आज नि प्रत्यक पल पल मा याद दिलाई रहन्छ ।
यथार्थ बाट धेरै नजिक नजिक बाट नियाल्न्ने प्रयासमा तेही तन्यारी ले मेरो मोबाइल न. पायछ र फोन गर्न् पुग्यो केही दुइ शब्द बोलि फोन राख्यो र मैले नै कल ब्यक गरे अनि कुरा गरे । त्यो फोन गर्न स्टैल ले मलाई अचम्म मा पारयो त्यो शब्द जो कोहि संग नि उप्त वाक्य प्रयाग मा कमै आउथ्यो र म संग भेटने निधो गर्यो र मैले नि हुन्छ भनि आफै काम गर्ने अफिस मा बोलाय र फोन राखिदिय । पहिलो बोलि नै कस्तो सुनु सुनु लग्ने त्यो नव युबक को बोलि कुनै जादु गर भन्दा कम थियन ।
दिउसो को बेला थियो ईलाम मा घाम को तेती धेरै चर्का चर्की हुँदैन्थ्यो तेही सिलसिला मा आफु आउँदै गरेको जानकारी दिलयो । मैले नि त्यो नव युबक को प्रत्छिय मा ढोका बाहिर नै आयकी थिय । न् भन्दै मेरै सामु एक सुन्दर सलक्क परेको जिउडाल भयको युबा आयको देखे अनी उस्ले नै तपाईं नै हो सानु जि भन्दै सोध्यो , अनी मैले नि हो भन्दै नजिकै रहेको बेन्च म बस्न आग्रह गरे अनी ओहा नि बस्नु भयो । हामी बिच परिचय को सिलसिला सँगै उहा को घर त सुदूर पश्चिम मा पो रहेछ । जागिर को सिलसिलामा ईलाम मा आउनु भाको रहेछ टाढा को मान्छे भेत्दा धेरै खुशी लाग्यो भन्दै फेरी फेरी आउँदै गर्नु होल भन्दै हामी त्यो दिन को लागि तढियका थियउ । त्यो पहिलो भेट बाट नै मैले मन मनै सोछेकी थिय मेरो जिन्दकी म पक्कै म् नजिक को सहयात्रि बनाउछु सोचेकी थिय । समय बित्दै गयो हामी बिच फोन मा आपसी कुरा हुँदै थिय उन्को त्यो मधुरो बोलिले म् एती धेरै पर्भाबित् भय कि मैले अरु केटा साथी सँग को कुरा कहिलै भयको थियन ।
आज नि त्यो पहिलो भेट को पहिलो बोली र उन्को त्यो नजर लाई मेरो जिन्दकी भर सम्झी नै रहनेछु । तेस पछी हामी दिननु दिन प्रत्यक पल पल मा फोन बाट भय नि नजिकी यका थियौ । हामी हरु को अफिस नजिकै भयका ले खाजा खाने निउ मा नि भेट भैइ नै रहन्थ्यो । चिया नास्ता खाने बाहना पारी त्यो युबक ले फोन गरी नै रहथ्यो । मलाई नि त्यो युबक सँग कुरा साटा साट गर्न्न पाउदा मन भुतुकै हुन्थ्यो र म नि हुन्छ भनी नजिकै रहेको चिया पसल मा जान बिबस थियौ । एती छिट्टै कसरी नजिक भय मलाई केही थाहा भयन । केबल मेरो भावना सँग मात्र घुल्मिल भय र मैले नि त्यो युबक को भावना बुज्न पाउद मन सँग मन नै साटे झै आनन्द हुन्थ्यो किन कि मेरो भावना र उस्को भावना धेरै मिल्न्न जान्थ्यो ।
हुन त म् नि के मा पो कमी थिय र ? यो जवानी को बैस सलक्क परेको जिउडाल , गुलफी ओठ , मिर्ग नयनी आँखा , नाग्बेली लटठ परेको सुन्दर केस , बारुली कम्मर सुकोमल हात जो कोही ले नि नजिकै बाट सुम सुम्याइ रहु लाग्ने , जो को हि नव युबक ले खाउला झै गर्ने कधर टेस मा नि एक सु कुमारी केटी देख्दा कुन पुरुश को मन न लोभियला र? एही बैस यब जवानी देखेर होला त्यो सुदुर पश्चिम को केटा ले मलाई दिन दिनै नजर जुझायको । हुन त त्यो मेरो जिन्दकी को नव युबक नि, के मा पो कमी थिय र ? तथापी आपसी सम्बन्ध फोन बाट र सबै को बहु चर्चा मा रहेको फसेबुक बाट हामी बिचार आदन प्रदन गरी नै रह्न्थौ एसरी नै हामी बिच छोटो समयमा नै हामी धेरै नजिकियका थियौ । एही नजिकियको कारण ले होला हाम्रा बिदा का दिन कहिले नि टाढा हुनु परेको थियन । नजिकै रहेको चिया बारी होस् कि अलिक टाढा पार्क तिर जान कहिले नि पछी परेनुउ । सधैं जहाँ गय नि आपसी सम्ज्दारी मा जाने गर्थौ र जन्थौ पनि । म पनि वस्तबिक जिन्दकी लाई त्यो जवानी ले मातेको केटा कै प्रेम मा पागल सारी दिवाना भैइ सकेकी थिय । उनकै प्रेम मा डुबेकी थिय , न् डुबु नि कसरी उनका प्रत्यक कृयाकलाप देखी भावना मेरो जिन्दकी लाई वार पार गर्ने पुल बनी दिदा, को तन्नेरी केटी भुल्न सक्छ होला र?
समयको गती सँगै हामी बिच को मायाको गती ले नि आफ्नै रप्तार मा कुदी रहेको थियो । हामी सधैं जसो भेट घाट , हासो खुशी मा दिन बिताउथौ शनिबार को दिन ईलाम बजार बाट टाढा जाने निधो गर्‍योउ अनी ईलाम बजार बाट केही टाढा एकान्त्त ठाउँ मा जाने निर्ण्य गर्‍योउ र शनिबार को प्रतिछिय मा थियौ र शनिबार नि आयो र हामी नि त्यो मेरो जिन्दकी को पहिलो युबा सँग बाईक मा चढी केही टाढा एकान्त मा जान पुगेउ । पहिला त मलाई केटा साथी सँग पहिलो पटक टाढा गयको ले मन मा डर् र चिन्ता ले सतायको थियो तर पछी जब कुनै एकान्त मा सँगै हामी बिच को पहिलो पटक नजिकै बाट टासियर बसेउ अनी जिन्दकी का तिता मिठा पल को कुरा कानी गर्न पछी परेनौ । पहिला पहिला त हामी फोन र फेसबुक बाट मात्र कुरा हुने गर्थ्यो तर आज त् सँगै नजिकै बाट उनकै समिप मा बसी माया पिरती का कुरा ले हामी लाई अछुतौ राख्न्न सकेन । हामी यती नजिकियउ कि जसरी नङ र मासु को हुन्छ तेसै गरी उन को र मेरो सम्भन्ध जती सगर मा रहेको माछा लाई पनि को आवसेकता हुन्छ तेती नै मलाई उस्को अपरीहार्यता हुन पुग्यो । म नि त्यो नव युबक लाई प्रतेक पल पल मा उप्त घना जङगल मा बसेर गरेका मिठा छेड हरु लाई सम्झी रहन्छु । अनी उन्कै बाधियको द्रस्य को पारीकल्पना मै डुबी रहेछु । मैले आफ्नो जागिरए दौरान लाई भुली सकेकी रहेछु आफ्नो दाँयार भन्दा बहिर गयकी रहेछु माया ले मलाई नि अन्धो बनाइ सकेको रहेछ। म् केबल मेरो जिन्दकी को सह् यात्री लाई सम्झी रहन्थ्य अनी उहाकै भेट को प्रतिछ्या मा दिन रात बित्यो । मात्र केबल मेरो जिन्दकी को राजकुमार केबल मेरो केसु को जिन्दकी को सहयात्री मात्र उहाकै ।
हामी बिच सधैं जशो कही कतै घुम्न पछी पर्दैन्थ्योउ सधैं झै उहाले नि आफ्नो काम लाई थाती राखी म सँग को भेट लाई सुखद पार्न जिन्दकी को सहयात्रि बनी आउनु हुन्थ्यो र म् नि जिन्दकी भर सँगै ओहाकै सात पाइ रखौ भनी भगवान सँग प्राथना रत थिय । मैले नि उहाको माया एसरी नै पाइ रहु प्रत्यक पल पल मा सँगै हात मा हात मिलायर जिन्दकी को सह्यात्रि बनी मन मुटु देखी नै माया गरी रह्न्थ्य ।
समयले कोल्टो फेरे झै हामी बिच को माया ममता ले नि कोल्टो फेर्ने मोड मा पुग्यो । मेरो मन मुटुको राजकुमार आज नि सँगै भयको भय बितेका ति मायालु छेड् को यद दिलाई नै रहन्थ्यो । आज उहाको अनुपास्थितिमा मेरो मन मस्तिस्क का प्रत्यक पाइला हरु मा केही कमी नै भयको महसुस भयको छ। यो सुन्दर ङरी ईलाम मा उहा नभय नि सँगै भयको बेलाको माया ले आज नि जिन्दकी भर को लागि आघयकी छु । हामी बिच को बाधेता यब बिबस ता मैले नि ति नजिकीयका दिन हरुमा बुझिसकेकी थिय । माया गर्दा नि स्मज लाई हेर्नु पर्ने रहेछ । एक मन ले त् सोच्थ्य जहाँ जे भय नि हामी बिच को माया ममता को कारण उहाकै समिप मा जिन्दकी भर को लागि जाउ सोच्छु तर अर्को मन ले कसको जिन्दकी खुशी रहेको देख्दा देख्दै बर्बाद पार्नु मेरो जिन्दकी भर को सबै भन्दा भुल हो सम्झन्छु । उहा को जिन्दकी मा नि एक नारी नै त् हुन नि एक नारी को पिडा अर्की नारी ले नबुझ्नु अन्याय हुन्छ कि त ? तर जहाँ जे भय नि केशु ले मलाई आफ्नी जिबन साथी भन्दा औधी माया गरी रहेको छ् । मलाई जहाँ सम्म लाग्छ साचो माया कहिले नि मर्दैन जो कालन्तर सम्मा अंमर अजर रहिरह्ने छ् । मन मा अनेक थरी का कुरा हरु खेली रहेका छन मेरो मन ले त आज नि पहिला को झै मेरो जिन्दकी को राजकुमार् उहा नै हो तर कुनै बेला मन मा डाहा लागेर आएरहन्छ । के गर्ने समयको खेल भनु कि दैब ले न् जुराय पछी कस्को के नै लाग्छ र्? आज भोली नि नजिकै देख्दा एक पल्ट नबोल्दा मेरो मन थाम्न नै सकिदैन , आँफै माथि आत्मा ग्लानी हुन्छ सपनामा एयठैन भय झै मन मा तेही मोरा को याद ले सतए नै रहन्छ । उहाको अझै गरेको माया सुन्द त समिपै मा गयर जिन्दकी भर आफ्ना सर सह्यात्रि छोडि ईलामएली बाट बिदा गरु सोछु तर माया मा त्यग गर्न सक्नु पर्ने रहेछ । मैले आफ्नो जन्म भुमी छोडन कठिन् भको छ। म नि उहा बिना किन एसरी दिवाना भय के मैले अरु केटा साथी न् पाउला र्? केशु र म बिच जे जती कृयाकलाप भय ति सबै सपना सरी हरौनै पर्छ नत्र मेरो बाँकी जिन्दकी लाई घच घच्यैनै रहनेछ । न होस् पनि कसरी ति बितेका दिन मा कहाँ रमाउन् बाँकी नै थियो र्? मात्र केबल जिन्दकी को लामो खूत्किलो पर गर्न मा मात्र ठेस लग्न पुग्यो तर नि मैले भन्दा अझै नि उहाले बढी माया दियकै छ् जस्तो लाग्छ। माया गर्न मा प्रतिस्पर्दा भय झै जिन्दकी भर उहा को माया को अपेछ्य मा नै बाँकी जिन्दकी बितयकी छु । तर जहा सम्मा केशु सँग नभय अरुलाइ भय भने तेती धेरै माया गर्ने मान्छे एस दुनियाँ मा कमै भेटइयलान मात्र केशु ले गर्ने माया मा आज का बाँकी दिन उहा कै याद मा र नजिकै को अफिस बाट एक नजर भय नि टाढा बाटइ नियली रहेकी छु मात्र मेरो जिन्दकी को पहिलो प्रतिबिम्ब लाई केबल केशु लाई केबल केशु लाई अस्तु । । ।
केशब सिंह धामी "कन्चन"
Good for my life.
अतिथि (not verified) — Thu, 12/22/2011 - 15:04
Keshab G this also meet for my life.Pheri pheri lekh rachana send gardai garnu hola.
गर अब राज
मेरो जिन्दगी, मेरो विश्वास: करुणा भाव हरेकभित्र छ
के हो मित्र
पुँजीवादी प्रेमको व्यंग्यात्मक व्याख्या
अन्तर खोज्दै छु
प्रिय तिमी त्यसरी हैन ! यसरी आऊ !
कतै पलास छ